ओली थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा ; को-को बन्दै छन् त मन्त्री ? (नाम सहित) – Sadhaiko Khabar
ओली थप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा ; को-को बन्दै छन् त मन्त्री ? (नाम सहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २३, २०७८ समय: १६:०७:५२
काठमाडौं / शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः थप मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न लाग्नुभएको छ ।
सम्भवतः आज (आइतबार) बेलुकासम्म थप मन्त्रीहरुलाई नियुक्ति गरिने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा यस विषयमा छलफल भएको छ ।
तीनै मन्त्रालय भर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवतः आज राति नै मन्त्रीहरुलाई नियुक्ति दिने तयारी गरेको बताइएको छ । शुक्रबार जसपाका १० जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा सहभागी गराउनुभएको छ ।
अब, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्वमाओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
जो मन्त्री बन्दैछन् :
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालयमा आगामी चुनावमा भूमिका निर्वाह गराउन सक्नेलाई नियुक्ति गर्न लागेका छन् । गृहमन्त्रीमा भक्तपुरबाट निर्वाचित महेश बस्नेतको नाम अघि रहे पनि खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी एमालेका पूर्वसांसद नारदमुनि राना मन्त्री बन्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्री बन्न लागेका राना कैलालीबाट काँग्रेस नेतृ आरजू राणालाई ०७४ को चुनावमा पराजित गराउने व्यक्ति हुन् । रानासँगै मन्त्री बन्नेमा पार्वती बिसुंखे, राजबहादुर शाही, विशाल भट्टराई र राजेन्द्र राई रहेका छन् ।
हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद्को कूल संख्या २४ पुग्नेछ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउँदैन ।